Soomaaliya: Madaxda DFS iyo maamullada oo kulmay
MUQDISHO, Soomaaliya- Waxaa goor dhaweyd xarunta Madaxtooyada Soomaaliya kulan ku yeeshay Madaxweynaha dowladda Federaalka, Ra'isal wasaaraha, madaxda maamullada iyo Guddoomiyaha gobolka Banaadir.
Shirkan oo ahaa mid albaabadu u xirnaa ayaa ka dhacay qaybta VIP-da guriga Madaxweyne Farmaajo ku leeyahay Villa Soomaaliya.
Wararka uu ka helayo kulankaas Garowe Online, ayaa sheegaya inuu ahaa kala warqaadasho iyo is-faham ku aadan ajandayaasha loo ballansanyahay in maanta laga doodo.
Madaxda ayaa is-arkay xilli la filayo in saacadaha soo socda uu ka furmo Madaxtooyada Soomaaliya kulan u dhaxeeya dhinacyadaas oo looga hadlay khilaafka siyaasadeed ee ka dhex taagan, amniga iyo la dagaallanka Al Shabaab.
Majirto faah faahin dheeraad ah oo shirkaas saxaafadda laga siiyay, balse dad xog ogaal ah oo la hadlay Warsidahan ayaa sheegaya in madaxdu rabaan inay isku afgartaan qodobada shirka lala tagayo iyo is-waraysi ku aadan xaalka guud ee dalka.
Arrintan ayaa imaanaysa xilli xaalka amni ee Muqdisho uu kasii darayo iyadoo xalay weerar lagu qaaday guri ay dagaanaayeen madaxda iyo dad shacab ah.
Wixii kasoo kordha kulankaas wararkeen dambe ayaad ku daalacan doontaan
Khayre wuxuu tilmaamay in kulankan uu leeyahay ajandayaal dhowr ah, balse hadii lagu heshiiyo ay la macno tahay Soomaaliya ...
Soomaaliya: Barlamanka oo ansixiyay heshiiska Hindiya
Soomaliya 14.10.2017. 13:56
Wasiirrada Soomaaliya oo ansixiyay xubin kamid ah Guddiga Dastuurka
War Saxaafaded 24.11.2017. 00:27
Saraakiil Ajaanib ah oo ka tirsanaa Al-Shabaab oo la dilay [Xog cusub]
Soomaliya 13.01.2019. 23:41
Mareykanka oo in ka badan $900 oo million ugu deeqay Soomaaliya
Soomaliya 19.12.2018. 13:39